यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि अरुलाई नसुनाऊनुस् ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ४, २०७८ शुक्रबार 293
काठमाडौं : हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरुले निन्द्राबाट बिउझिंदा आफूले देखेका सपनाहरु बिर्सिने गर्छन। त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको संकेत गर्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरु रातको समय मा देखेको सपना विहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन। यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा क हुन्छ ? यदि आफूले देखेका केही अचम्मलाग्दा सपनाहरु निन्द्राबाट बिउँझिने
बितिकै अरुलाई सुनाउने गर्दा तपाईलाई त्यस सपनाको फल प्राप्त नहुने साथै यसले तपाईको जीवनमा पर्ने प्रभाव घट्दै जान्छ। आज हामी तपाईहरुलाई यस्ता केही पाँच वटा सपनाको बारेमा बताउन जाँदै छौँ जुन तपाईले अन्य व्यक्तिहरुलाई सुनाऊनु भएमा तपाईको जीवनमा यसबाट हुने प्रभाव कम हुँदै जाने गर्छ।
सपनामा साँप देख्दा जो कोहि ड’राउने गर्छन वा घृ’णा गर्न सक्छन तर यसरी सुतेको समयमा साँप देख्नु अन्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यदि तपाईलाई साँपले लखेटेको ,घेरेको वा टोकेको देख्नु भएमा यो जान्नुहोस् कि तपाईको जीवनमा ठूलो मान-सम्मान,धन प्राप्त गर्नुका साथै तपाईका हरेक कदम प्रगति उन्मुख हुनेछन्।
Prevभिडियो खिचेर युट्यूबमा प्रसारण गर्ने तीन युट्युबर प’क्राउ, तीन फरार !
Nextआज भदौ ५ गते शनिबार ,कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नु-होस राशिफल !
पर्वतमा पहिराेले पुरिएर ५ जनाको मृ’त्यु, ३ बे’पत्ता !